Kokonti Yakaoma Dregs uye Tofu Dregs Na EM4 • Yurie BSF
Chii Chinoshandiswa Kokoti Dregs uye Tofu Dregs ne EM4
Parizvino zvirongwa zvekudya zvinowanikwa mune zvakawanda zvinodhaka nekuda kwekuwanika kwavo kukuru uye mitengo yakaderera. Chimwe chezvokudya zvinoshandiswa sekudya kwehove iko kokonati pulp uye tofu. Kuita kuti zviitwe nekuviriswa ne em4. Kokonti yemaspir fermentation pamwe nemigumisiro ye em4, tofu mhute yekuvirisa ne em4 yakaitwa kuitira kuti konikiti pulp kana kuti tofu dregs ye catfish feed ine hutano hwakanaka hwehove uye yezvakatipoteredza. Muchikamu chino, tichakurukura kuti tingagadzira sei em4 pachayo nokuda kwekuvirisa.
Chinangwa chekuvirisa ichi ndechekuwedzera mishonga yose inogona kudyiwa nehutachiona hwehuve hwehove, kuderedza fiber yakajeka muzvokudya zvakapiwa kuitira kuti zvose zvinovaka muviri zvigadziriswe panguva yekuparadzanisa mishonga kubva kunhengo dzekudya zvinoshanda zvakakwana, dongo rakasara kubva pakugadzirwa uye gare gare dumped through the sewage.
EM4 kana kuti microorganism inobudirira inenge ine mvura inenge yakawanda yehutachiwana hutano oraganism iyo yakanaka kune ivhu uye zvakatipoteredza. Ichi chinonwiwa chinotapira uye chinonhuwira. Mune teknolojia yeXXUMUMX ye1980 yakagadzirirwa kuderedza kushandiswa kwezvinhu zvinokuvadza mishonga yemakemikari uye kubatsira uye kutsigira mabasa epurazi ane ushamwari. izvi zvinotevera mamwe mabhakitiriya ari mune EM4:
Rhodopseudomonas mabhakitiriya anoshandisa kuumba michina inobatsira kubva pamakemikari ekubudiswa kwemidzimu midzi, magasi anokuvadza, uye zvigadzirwa zvehupenyu zvine rubatsiro rwezuva sechinhu chinopa simba. Zvinhu zvinobatsira zvakagadzirwa kubva kune mabhakitiriya ndeye nucleic acids, amino acids, sutu, uye bioactive zvinhu izvo zvose zvinoita kuti kukurumidza kukura. Iyi migumisiro yemigumisiro inokwanisa kuiswa zvakananga nemiti uye kushanda se substrate kune dzimwe mishonga kuitira kuti nhamba ienderere mberi kukura.
Lactobacillus sp. Bacteriya
Aya mabhakitiriya anoita basa rokudzivisa kukura kwemakemikari anokanganisa anoparadza, kuparadza zvinhu zvakadai se lignin / cellulose, kuwedzera kukurumidza kwekuchinja kwezvinhu zvakasikwa, uye kuivhenekera pasina kukonzera mishonga inopisa inokonzerwa nekuora kwezvinhu zvakasikwa. Aya mabhakitiriya anokwanisa kudzivisa kukura kunowedzera kwezvipembenene zvinokonzera zvirwere.
Iro mbiriso inobatsira hutano hwekudya hwemagestive system. Ichi mbiriso inobereka bioactive substances, iyo enzymes uye mahomoni, ayo anobatsira pakuwedzera nhamba yemasero anoshanda.
Iyi bhakitiriya iyo fungus inobatsira kwazvo ivhu uye nzvimbo, uye inogadzira antibiotics. Izvi zvinopesana nemakemikari mukati me actinomycetes zvinogona kudzivisa kukura kwefungi uye mabhakitiriya akaipa.
Iyi fungus inonzi aspergillus uye penicilium, fungus inogona kubvisa zvinonhuwira uye kudzivirira zvinoparadza zvipembenene zvipembenene uye mhondi dzinokuvadza nekubvisa kugoverwa kwezvokudya, uye kuputsa zvigadzirwa zvakakurumidza kubudisa esters, anti-microbial substances nedoro.
Kubatsirwa kwekushandisa EM4
Mumunda wekurima, zvipo zvinotevera:
Kuenzanisa zvipembenene mumakumbo emombe
Kudzivirira zvirwere mumhuka
Kuvandudza kunaka kwezvipfuwo
Apo uri mumunda wekurima hove zvinobatsira ndezvi:
Dzokai zvokudya zvekudya
Kunoderedza kukura kwezvirwere.
Kuvandudza unhu hwehuve
Dzinga zvirwere nezvirwere.
Nzira Yokuita Yako EM4 Solution
Bucket kana mudziyo wevhu
Chinanaini 1 kg
0,5 kg kureba bhinzi
Tsanga duku yebhanana mukati 3kg
Mvura yemapombi / Koconon mvura 1 liter
2 kg shuga
Plastic bottle / jirigen
Zvose zvinoshandiswa zvinowanikwa mumudziyo uye zvinopwanyika kuti zvive zvakanyanya. Chibereko chinoshandiswa chinofanira kuibva. Iwe unogonawo kushandisa michero isingadyi kusanganiswa.
Isa mubhari kana bhaketani.
Itai kuti shuga isanganise zvakanaka
Dururira muchineni waini / konaji mumvura mubhakiti uye shingairira kusvikira yakanyorova.
Mushure mekunge uchikuvadza zvakanyanyisa, bvisa zvakasimba uye uvhare chivako.
Regai kumirira 1 vhiki
Mushure mokunge XNXX pavhiki, muunganidze mumudziyo
Shingairira zvakagadziriswa sarudzo
Isa iri mubhodhoro / jirigen uye uvhare zvakasimba
Kuguma kwe em4 gadziriro ndeye 6 mwedzi
Ndizvo zvaunoita iwe em4 sarudzo yaunogona kushandisa kumba. Mushure mekuziva kuti Em4 chii, kushandiswa kwayo, uye nzira yekuzviita iwe pachako, zvino zvinotevera kushandiswa kwe em4 pamusoro pekonikiti pulp uye tofu mhuka kuti iite catfish feed.
Kozi Yakabikwa Inosiya EM4 For Catfish Feed
Yakasvibiswa Tofu Dregs ne EM4 KwaCatfish Feed
Bhakanyi rakakura / dramu rine chifukidzo chakakonzerwa (kuisa hose)
Tofu inoparadza 5 kg
Chikafu chegorosi 4 kg
BSF 1,5 kg yeupfu hwemaggot
EMXNUMX XNUMX liter
20 hove yemafuta emafuta
Punch chivharo chedu
Isai hovha iyo mugumo wavo wakafukidzwa nejaize muchitinha chivako
Shandisai zvose zvinoshandiswa uye shingairira kusvikira yakasvibira
Wedzerai musanganiswa kumutambo
Regai kumirira anenge 7 pazuva
Mushure mokunge 1 isungirwa kwemavhiki
Dyai musanganiswa muzuva saka hazvisi kuumbwa
Purasitiki nemapelisi zvakagadzirira kushandiswa se catfish feed.
Zvakanaka, ndiyo nzira yekuita catfish kudya achishandisa EM4 solution, tarisiro ichave yakakosha kune shamwari dzose.